नेपालकै कान्छी गाँउपालिका उपप्रमुख तामाङ् भन्छिनः ‘ पैसा कमाउन खोज्नेले राजनीति नगर’ – Eshankharapur
Breaking News-हिजो घटेको सुनको मुल्य,आज सोच्नै नसकिने गरि यस्तो भयो ! जान्नुहोस् ;
सुशान्त प्र’करण: श्रद्धा, दीपिका र साराको मोबाइल एनसीबीको क’ब्जामा….
कोरोना चिनियाँ ल्याबबाट आएको हो कि होईन ? डब्लुएचओ प्रमुखले दिए यस्तो जवाफ !
फेरी सवारी साधन जोर–बिजोरमा उच्च कडाई, समय तोकेर मात्र अफिस, उद्योग सञ्चालन
५० लाख लिएर अर्कै संग श्रीमती फ’रार, साउदी बाटै श्रीमान रुदै मिडियामा, बच्चाको बि`जोक, मनै छुने भित्री कहानी (भिडियो सहित)
काठमाडौँ`मा पहिलो पटक आज बाट लागु भयो नयाँ नियम !!
संसद बैठकमै जब सांसदले प्रेमिका संग यस्तो हर्कत गरे, भिडियो भाइरल (भिडियो हेर्नुस्)
आक`स्मिक बैठकको निर्णय: अनिश्चित`कालका पसल/व्यवसाय र सबै सरकारी कार्यालय ब`न्द गर्ने !
मुख्य पृष्ठ /Political Views/नेपालकै कान्छी गाँउपालिका उपप्रमुख तामाङ् भन्छिनः ‘ पैसा कमाउन खोज्नेले राजनीति नगर’
नेपालकै कान्छी गाँउपालिका उपप्रमुख तामाङ् भन्छिनः ‘ पैसा कमाउन खोज्नेले राजनीति नगर’
काठमाडौं । नेपालकै सबैभन्दा कान्छी उमेरकी गाउँपालिका उपाध्यक्ष हुन सिन्धुपाल्चोक,जुगल गाउंँपालिकाका उपाध्यक्ष सिर्जना तामाङ् । सानैदेखि बहुप्रतिभाशाली उनी पढाइमा समेत उत्तिकै अब्बल थिइन् । त्यतिमात्रै होइन उनी सानैदेखि राजनीतिक क्रियाकलापमा सक्रिय रहन्थिन । जुगल गाउंँपालि`काको जनताको मनमु`टुमा बस्न सफल उनले तात्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको तर्फबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि भारी मतले जितिन ।
झण्डै ३ बर्षको वितिसक्दा उनले स्थानीय गाउँपालिकामा रहेर थप अनुभव प्राप्त गरेकी छिन । तर उनमा पछिल्लो राजनीति गतिविधि देखेर चिन्ता लागेको छ उनीमात्रै हैन आम युवाहरूले पोल्टिक्स इज डर्टी गेम भन्दा उनी निरास छन् । यी र यस्तै अहिलेको राजनीतिक परिवेष उनका अनुभव र भावी योजनाका बारेमा सुनौलो नेपाल डट कमका लागी सन्तोष निरौलाले तामाङसंँग गरेको कुराकानीको संपादित अंश ।
तपाई नेपालकै कान्छी पालिकाको उपाध्यक्ष बन्न सफल बन्नुभयो । यो कसरी सम्भव भयो ? म सानै देखि मेरो गाउंँपालिकाको हरेक कार्यक्रममा सहभागी हुन्थे । बिशेषगरी महिलाले भोगेका समस्याबारे म चनाखो हुन्थें । र उनीहरुले भोगेका दुःख, महिला हिंसा कसरी न्यूनिकरण गर्ने भन्ने बारेमा चिन्ता पनि थियो । अर्कोकुरा म ०६२, ०६३को आन्दोलन देखिनै एमाले पार्टीप्रति सद्भाव थियो सानैभएपनि राजनीतिक गतिविधि नियाल्ने कोशिश गर्थे । ततपश्चात म जिल्लााको पार्टीको वि`भिन्न तह र तप्कामा काम गर्ने मौका पनि पाएंँ । साथै सामाजिक संस्थामा पनि आवद्ध रहंँदै आएको थिएां ।
तपाई जत्तिको महिला अन्य क्षेत्रतिर पनि लाग्न सक्नुहुन्थ्यो किन राजनीतिनै रोज्नु भयो । म सानैदेखि आफ्नो गाउंँको परिवर्तन गर्न चाहन्थे । यस्तो पिछडिएको गाउंँलाई परिवर्तन गर्नु चानेचुने कुरापनि थिएन । अर्कोकुरा हाम्रो समाज अझैपनि पुरातनवादी र कुप्रथाले जकडिएको छ । तर ममा दृ ढ विश्वास थियो, । म जसरी पनि परिर्वतन गराएरै छोड्ने मेरो अठोट थियो । विश्वमा आधा आकाश ढाकेको महिलाहरु अझैपनि नेतृत्व तहमा न्यून उपस्थिति देखेर मन भतभती पोल्थ्यो । सो क्रममा त्यतिबेला मैले विश्वमा महिलाको सह भागिता भन्ने पुस्तक पढ्ने मौका मिल्यो । जुन कितावमा जम्मा विश्वमा १६ प्रतिशत महिलाको मात्र सहभागिता छ भन्ने थाहापाएपछि । मलाई झन राजनीतिमा जाने प्रेरणा मिल्यो । आखिर हाम्रो देशको हरेक क्षेत्र राजनीतिमा भर पर्छ । परिवर्तनको लागि राजनीति रोज्नुको विकल्प अरु थिएन । राजनीति मोहकै कारण म यस क्षेत्रमा आकर्षित भएंँ । जसबाट म केहीहदसम्म सफल भएको छु भन्ने लाग्छ ।
राजनीति त फो`होरी गेम भन्छन नि यसमा तपाईको धारणा के छ ? राजनीतिमा आफैमा फोहरी गेम होइन । जसले यसलाई दुरुपयोग गर्छ र आफ्नो सिद्धान्त र एजेण्डा मिचेर बाहिर जान्छ त्यो व्यक्ति फोहोरी हो । नेपालको राजनीतिमा पनि हरेक दलका सिद्धान्त ,एजेण्डा राम्रा छन तर नेतृत्व खतम छ । उनीहरुले राजनी तिलाई भ र्याङ् बनाएका छन । मागी खाने भांँडो बनाएका छन । जसका कारण जनताको विश्वास गुम्दै गएको छ । त्यसैले म भन्छु पोलिटिक्स इज नट अ डर्टी गेम । अहिले हरेक स्थानीय तहमा जन प्रतिनिधिले जनताका काम राम्रोसांग गर्न नसकेको आरोप छ ।
तपाई उपाध्यक्ष भएर आउंँदे गर्दा जनताको आशा र अपेक्षा कसरी पुरा गर्दै आउनु भएको छ? के जनता तपाईको कामबाट सन्तुष्ट छन ? मेरो गाउंँपा लिकामा पनि काम गर्न चुनौति त हुन्छ नै । तर मैले चुनौति बाट पन्छिन मिल्दैन । तर अधिकांश कुरा गाउँ पालिकाको अध्य क्षको कार्यशैलीमा पनि भर पर्दछ । जनताले अझैपनि यो कुरा बुझ्न सकेका छैनन। अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई एउटै डोकोमा राखेर हेर्ने गरिएको छ । जसका कारण आफूले चाहेर पनि कतिपय काम गर्न सकिदैन । तर मलाई विश्वास छ मेरो काम कर्तव्य , अधिकार र जिम्मेवारीमा रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेकी छु ।
चीनले गोर्खाली सेनाबारे चासो देखाएपछि भारतमा तनाव ! नेपालबारे दुष्प्रचारको प्रयास
घरमा राख्नुस् यी ५ चिज , जसले हामीलाई ऊर्जावान बन्न मद्दत गर्छ
प्रधान-मन्त्री र पार्टी दुबै पदबाट राजीनामा माग !
बिहान उठेर कहिलै नगर्नुहोस् यी ४ काम बेवास्ता गरे जीवनभर पछुतो हुनेछ !